यसकारण नेपालमा लकडाउन आवश्यक छैन - Pokhara News
कोरोनाको सुरुवातको समय अनुसार डव्लूयचओ (WHO) ले भनेको थियो अवको केहि महिना भित्र संसारका दुइ करोड मानिसको मृत्यु हुनेछ । तर अहिले सम्म ४३,७६,४९३ कोरोना संक्रमित भेटिएका र २,९४,४८७ मानिसको मृत्युको आँकडा ल्याएको छ, अर्थात ६.७३ प्रतिशत मृत्यु देखाइएको छ । के बाकी ९३.२७ प्रतिशतमा मानिस कोरोना मुक्त हुन सके भने अरु पनि कोरोनाबाट बाच्न नसक्लान् ? यहि मृत्यु भएका मानिसलाई लिने हो भने पनि के ग्यारेण्टि छ कि यो देखाइएको मृत्यु केवल कोरोना संक्रमण बाट मात्रै हो ?
इटलीको मृत्युलाई नेशनल हेल्थ इस्टीच्यूट अफ इटली कै रिपोर्टमा प्रस्ट भनिएको छ कि, ४८.६ प्रतिशत मानिसमा कोरोना बाहेक ३ वटा अन्य बिमारी थिए, २६.६ प्रतिशत मानिसमा कोरोना बाहेर २ वटा अरु बिमारी थिए, २३.५ प्रतिशत मानिसमा कोरोना बाहेक अरु १ वटा बिमारी थिए अव बाँकी केवल १.२ प्रतिशत १३८० मानिस मात्र कोरोनाका कारण मरेका छन् । अझै बिस्तारीत रुपमा जान Euromomo.eu बेवसाईट मा गई इटली वा अन्य देशको बिगत ५ बर्षको मृत्युदर हेर्न सकिन्छ । यस आँकडालाई संसारको मृत्युमा तुलना गर्नेहो भने केवल १ं.२ प्रतिशत मात्र कोरोना बाट मृत्यु भएको देखिन्छ अर्थात ३,५३३ मानिस मात्र कोरानाका कारणले मरेका रहेछन् । फरक यति हो कि अहिले मृत्यु अन्य जुनसुकै रोगका कारणले भएको भएता पनि कारण कोरोना देखाइ तुरुन्त मिडियामा ल्याइएको छ ।
लकडाउन गरिएका देशको संक्रमण प्रतिशत ५.६५ र मृत्यु प्रतिशत ६.७३ देखिएको छ । लकडाउन नगरिएका देशको संक्रमण प्रतिशत ३.४२ र मृत्यु प्रतिशत ०.८६ देखिएको छ । नेपाललाई हेर्दा कूल जनसंख्या ३ करोडलाई नै कोरोना जाँचियो भने पनि । यो असम्भव कुरा हो तर पनि बिष्लेशण गर्दा :-
परिस्थिती १ : पूर्ण लकडाउन गर्दा । संसारको सर्बाधिक संक्रमण अनि सर्बाधिक मृत्यु दरलाई लिदा ।
संसारको खराव परिस्थिती मा संक्रमण दर ५.६५ र लकडाउन गर्दाको मृत्यु दर ६.७३ लाई अध्ययन बिश्लेषण गर्दा नेपालको संक्रमण संख्या १६,९२,१४४ र मृत्यु संख्या १,१३,८६२ देखिन्छ । जुन असम्भव छ ।
परिस्थिती २: पूर्ण लकडाउन गर्दा । संसारको संक्रमणको अत्यधिक दर अनि लकडाउन नगर्दाको मृत्युदर लिंदा ।
संसारको खराव परिस्थितीको संक्रमण दर ५.६५ प्रतिशत र लकडाउन नगर्दाको मृत्यु दर ०.८६ प्रतिशत अनुसार अध्ययन बिश्लेषण गर्दा कूल संक्रमण संख्या १६,९२,१४४ र मृत्यु संख्या १४,५२१ हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
परिस्थिती ३ : लकडाउन नगर्दा । संसारकै लकडाउन नगर्दाको डाटा लिंदाको अवस्था ।
संसारका पूर्ण लकडाउन नगरेका देशहरुको डाटा अनुसार नेपालमा पनि पूर्ण लकडाउन नगर्दा संक्रमण दर ३.४२ र मृत्यु दर ०.८६ अनुसार अध्ययन बिश्लेषण गर्दा संक्रमण संख्या १०२५,८९२ र मृत्यु संख्या ८,८०३ अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
परिस्थिती ४ : नेपालको संक्रमण दर अनि संसारको अधिकतम मृत्यु दर लिंदा ।
नेपालको संक्रमण दर १.१७ प्रतिशत र लकडाउन नगर्दा संसारको मृत्यु दर ६.७३ अनुसार संक्रमण संख्या ३,५०,९४३ र मृत्यु संख्या २३,६१४ अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
परिस्थिती ५ : नेपलको संक्रमण दर अनि संसारको लकडाउन नगर्दाको अवस्थामा ।
नेपालको संक्रमण दर १.१७ प्रतिशत र संसारका पूर्ण लकडाउन नगरेका देशहरुको मृत्यु दर ०.८६ अनुसार नेपालमा पनि लकडाउन नगर्दा नेपालको संक्रमण संख्या ३,५०,९४५ र मृत्यु संख्या ३,०१२ अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
मानिसले साधारण जिवीको पार्जन गर्न पैसा भए पनि खाद्यान्न खरिद गर्न पाएका छैनन् । यस अवस्थामा के उचित होला ? के कुनै पनि संक्रमणको सिमीत अनि न्यूनतम प्रभाव बाट जोगिइन्छ भन्दैमा अत्यधिक जनसंख्यालाई अवहेलित गर्नु कति उचित होला ? यस लकडाउन पछिको आर्थिक अधोन्नतीका बारेमा सोंचिएको छैन ? पोष्ट लकडाउनमा कति मानिस आत्महत्या गर्नेछन् ? कुनै अनुमान लगाउन सकिन्छ ?
यसरी समग्र तथ्याङ्क हेर्दा मेरो बिचारमा लकडाउन आवश्यक छैन ।